रिपोर्ट नेपाल | 2020 Sep 08 | 12:48 pm	1184
यही मौकामा नेपाल खाने भारतको रणनीतिपछि चीनको जनमुक्ति सेना खासाबाट जवरजस्ती नेपाल छिर्न खोज्यो । तब मात्रै भारतको होस उड्यो । अमेरिकी मरिनहरु नेपाल र भारतलाई सोधपुछ नै नगरी फाइटर विमान लिएर काठमाडौंको एयरपोर्टमा उत्रिए । त्यसपछि भारतको होस थप उड्यो । यस पछि भारत आफै पछि हट्यो ।
जब नेपालमा कुनै संकट पर्छ तब भारतले साँच्चिकै गिद्धेदृष्टि लगाउँछ भन्ने यो पछिल्लो उदाहरण हो । आफुलाई नेपाली हौं भन्ने भारतीय दलालहरु ‘र’ को इसारामा सिंहदरबारमा तामझाम गर्ने गर्छन् । देशमा राहत वाड्न, आलो घाउमा मलम पट्टी लगाउन त कता कता भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त हुन्छन् । गिद्धले सिनो लुछेजस्तो बैदेशिक सहयोग लुछ्न प्रतिस्पर्धा हुन्छ । कतिले कर्कटपाता घोटाला गरे, कतिले टेन्ट घोटाला गरे । चामलका बोरा आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडे । नगद रकमको त हिसावै छैन । अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली शेष घले राहत बाढ्न आउँदा सरकारले उल्टै दुर्व्यवहार गर्यो । भूकम्पबाट भत्केका धेरै घर शेष घलेले पुनः निर्माण गरिदिए, तर उनको नाम निशान छैन । गोर्खा वेलफेयरले नेपालमा यस्ता काम शताब्दीदेखि गर्दै आएको छ , तर नेताहरुलाई गोर्खा वेलफेयरको नाम समेत थाहा छैन । नेपालीका निम्ति पसिना बगाउँदै आएकी जोहोना लुम्लेको नाम समेत नेताहरुलाई थाहा छैन । कसले कति सहयोग गर्यो ? लेखाजोखा छैन । भूकम्पले भत्केका सर्वसाधारणका संरचना कस–कसले कसरी निर्माण गरिदिए ? भन्ने अभिलेख सरकारसँग छैन । बनाउन कति बाँकी छ ? किन बन्न सकिरहेको छैन ? त्यो पनि सरकारलाई थाहा छैन । केही पात्रले कतार, दुवैमा गएर उठाएको राहत रकमबाट बनेका छाप्रालाई मात्रै राष्ट्रिय संजालमा हाइलाइट गरिन्छ । व्रिटिश गोर्खा वेलफेयरले बनाइदिएका विद्यालय भवनको फोटो पनि देखाँइदैन, समाचार पनि बन्दैन ।